ဘဝ ၊ သေဆုံး ခြင်း နှင့် ဂတိ
ခုတလော ကိုယ် နဲ့ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင် မှာ အဆင်မပြေတာလေးတွေ ဖြစ်နေရတာ များလာတာ နဲ့ အမျှ
ကိုယ့် ဘဝ ကိုယ် မကျေမနပ် ဖြစ်တတ်လာတာတွေ ဟာ ရင်ထဲမှာ အစိုင်အခဲ တခု အနေနဲ့အချိန်နဲ့အမျှ ကြီးသထက် ကြီး လာ ရပါတယ် ..ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ငါ ဒီဘဝ ကို ရနေ . ရောက်နေရတာလဲ ဆိုတဲ့အတွေး ပေါက်လာရလို့ အနားမှာ ရှိနေတဲ့စာအုပ်လေး တအုပ် ကို အဲဒီတော့ မှ ဖတ်ကြည့် ဖြစ်ပါတော့ တယ် ..
သေခြင်းကောင်းသော ဘဝ ၊ လားရာကောင်းသော ဂတိ ။။ ဒေါ်အေးမြင့်(မဟာဝိဇ္ဇာ) ရေးတဲ့စာအုပ် ငယ်လေး တအုပ်ပါ ..
ဒီစာအုပ် လက်ထဲရောက်နေတာ ကာလအားဖြင့် တွက်ကြည့်ရင် ၃နှစ် နီးပါး ကြာရှိနေပေမဲ့စာဖတ်ပျင်းတဲ့အကျင့်ဆိုး ကြောင့် မဖတ်ဖြစ်တာပါ ။ ပထမ ဦးဆုံး စာမျက်နှာကို လှန်မိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မျက်ရည်တွေ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ကျလ်ာမှန်း မသိလိုက်ပါဘူး .. သတိရလို့ကိုယ့်ကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်မိတဲ့ အချိန်မှာ ငါငိုနေပါလားလို့သိလိုက်မိပါတယ် .. မိတ်ဆွေတို့ထင်ချင်တဲ့ သူတွေ ထင်ကြမှာပေါ့ ..ဒီကောင်အတော်မျက်ရည်လွယ်ပါလားလို့ လေ ။ ဝမ်းနည်းလို့ ကျ ဖြစ်သွားတဲ့မျက်ရည်တွေပါ ..ဘာလို့့လဲဆိုတာ အကြောင်းတော့ ရှိရမှာပေါ့လေ ..
ညီမလေးအတွက် အမှတ်တရ .... တဲ့ 
လွန်ခဲ့ တဲ့တနှစ်ကျော်လေး က အမှတ်မထင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ ရတဲ့အချစ်ဆုံးအမ အလတ် ပေးထားတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့ ပထမစာမျက်နှာ ပေါ်မှာ သူရေးထားပေးတဲ့စာကြောင်းတို ရိုးရိုးလေး တကြောင်းပါဘဲ လေ.. အဲဒီစာတိုလေးကို သူရေးပေးနေချိန်မှာလဲ နောက်တနှစ်ကျော်ကြာတဲ့အခါ ငါလဲ သေရမှာပါလားဆို တဲ့ အတွေးမျိုး သူ့ ဆီမှာ ရှိနေမှာ မဟုတ်ဘူးဆို တာ သေချာ ပြောရဲ ပါတယ်...ကိုယ်တိုင်ကလဲ လက်ထဲရောက်နေတာ ၃နှစ်လောက် ရှိနေတဲ့စာအုပ် ငယ်လေး တအုပ်ကိုတောင် မှ အဖြစ်ရှိအောင် မဖတ်ခဲ့လို့စောစော သိသင့် တဲ့သေခြင်းတရားကို ခုမှ နားလည်အောင် လုပ်နေရတာ နောက်တောင်ကျနေပြီလား လို့ဆိုပြီး ရုတ်တရက် ခံစားလိုက်ရလို့ ပါ ...
ဒီတော့ ဘဝ ။ သေဆုံးခြင်း နဲ့ဂတိ ဆို တာ တွေကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့နားလည်အောင် ကြိုးစားပြီး မှတ်သားမိရပါတယ် ..
ရှေးရှေးဘဝ တုန်းက ပြုအပ်ခဲ့သော ကံ ကြောင့်ဖြစ်ရသော ရုပ် နာမ်(ခန္ဓာ) ကို ဘဝ လို့ ခေါ်တယ် ။
ဘဝကို ဂတိ နဲ့ တွဲ ပြီး သုံးလေ့ရှိတယ် ။
သေဆုံးပြီးနောက် ရောက်ရမည့် ဒုတိယ ဘဝ( ဂတိ ) ကို ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန် ၊ ပြိတ္တာ ၊ လူ ၊ နတ်ဗြဟ္မာ လို့၅ မျိုး ပြတယ် ။
သေဆုံးခြင်း မှာ အကြောင်းအားဖြင့်၎ မျိုး ရှိတယ် ။
၁၊ သက်တမ်းကုန်ခြင်း ( ဆီကုန်ခမ်းခြင်း)
၂၊ ကံအစွမ်းကုန်ခြင်း (မီးစာကုန်ခြင်း)
၃၊ သက်တမ်းနှင့် ကံအစွမ်း ၂မျိုးလုံး ကုန်ခြင်း (ဆီ နှင့် မီးစာ ၂မျိုးလုံး ကုန်ခမ်းခြင်း)
၄၊ ဥပစ္ဆေဒက - ကံ ကသတ်ခြင်း ( ဆီ နှင့် မီးစာ ရှိပါသော်လည်း ၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း ၊
လူသာမဟုတ် ၊ မည်သည့် သတ္တဝါမဆို သေဆုံးခါနီးတွင် နိမိတ် ၃ပါးထင်ပြီးမှ သေဆုံးကြပါပေသည်။
၁၊ ကံ နိမိတ် =အသက်ရှင်နေခိုက် မိမိတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သော ကုသိုလ်ကံ နှင့် အကုသိုလ်ကံ (စေတနာ) ဖြစ်သည်
၂၊ ကမ္မနိမိတ် = ထို ကုသိုလ် နှင့် အကုသိုလ် ပြုစဉ်က တွေ့ ကြုံ သုံးစွဲခဲ့ရသော အရာဝတ္ထု များဖြစ်သည်
၃၊ ဂတိ နိမိတ် =သေဆုံးပြီးနောက် ရောက်ရမည့် ဂတိ( ဒုတိယ ဘဝ ) တွင် မိမိတို့ရောက်သွားကြရမည့်၊ကောင်းသော ဘုံဘဝ ၊ မကောင်းသော ဘုံ ဘဝ ဟူသော ဖြစ်ရာ ဌာနများဖြစ်သည် ။
နိမိတ် ၃ မျိုးတွင် တမျိုးမျိုး ထင်လာတတ်ကြ ပေသည် ။
နိမိတ် အမျိုးမျိုးထင်ရပုံများ အကြောင်း ကိုတော့နောက်မှ အလျဉ်းသင့် သလို လက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြပါအုံးမယ်။
လိုအပ်နေတာလေးတွေရှိနေရင် .. ကွက်လပ်ပေါင်းများစွာ ဖြည့် ပေးကြပါ ။။။
:kiki : at 10/31/2008 08:01:00 PM
အသက်ရှည်လို့ဘုန်းမကြီး ။ ဘုန်းကြီးလို့အသက်မရှည်
သိတဲ့ သူများပြောပြကြပါ ။။
အသက်ရှည်လို့ဘုန်းမကြီး ။ ဘုန်းကြီးလို့အသက်မရှည် ။
တခုခုကို ရွေးပါဆိုရင် ဘယ်တခုကို ရွေးမှာလဲ
အသက်လဲမရှည် . ဘုန်းလဲ မကြီး ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှ ရွေးချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
အသက်လည်းရှည် ၊ ဘုန်းလည်းကြီး ။ ဒါတော့လူတိုင်း လိုချင်ကြမှာ မေးစရာတောင် မလိုပါဘူး..
( လဒပြည်မှ လဒကြီးများ ဤကဲ့ သို့ သော အကျိုး ကို ခံစား စံ စားနေကြရသည်မှာ ထူးဆန်း ဖွယ် တပါး ဖြစ်နေပါ သည် )
ဘာကြောင့်ဒီ သကောင့်သားများ ဒီဘဝမှာ ဒီလို ကောင်းသော အကျိုးများစွာ ကို ရရှိနေကြရပါသလဲ ။
ရှေးဘဝ မှ ကံ ၊ ကံ၏ အကျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင် ပါသလား ။။
ခု ဘဝ မှာ ဘုရားဖျက် . တရားမဲ့..သံဃာ ရိုက် ခဲ့ တဲ့အကြောင်း တရားတွေ အတွက်
ဝဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာ အပ ၊ ဘဝမကူးခင် ဒီဘဝမှာတင် ဝဋ်လည်ဖို့အကျိုးတရားများကိုရော ခံစားရဖို့အခွင့် အလမ်းများ ကျန်နေပါ အုံးမည် လား ။။
အဖြေသိသူ မိတ် ဆွေများ ။ အရုးလေးတယောက်ကို ပြောပြနိူင် ကြပါမည်လား ..
မှီငြမ်း ကိုးကားစရာ စာအုပ် စာတမ်းများ အနီးမှာ ရှာ မတွေ့နိူင်တဲ့အတွက်. .. ဖြတ်လမ်းနည်းကို အသုံးချလိုက်ရခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းပါသည် ။
:kiki : at 10/30/2008 05:57:00 PM
IdiotLove ရဲ့ ဇာတ်လမ်းအစ
ဗမာစကားနဲ့ စာကို မမေ့သေးပေမဲ့
ကျင့်သားမရသေးလို့ဒီစာတိုလေးတပုဒ်ရဖို့အတော်လေး အချိန်ယူရမယ်ဆိုတာ
အစကတည်းက နားလည်ထားပါတယ် ။
စာတပုဒ်ရေးဖို့ရေးသူအမည်တပ်ရမယ် ဆိုတော့ မှ
အပြေးအလွှား စဉ်းစားရတာ ...ငါဘယ်သူလဲ ပေါ့..ဒီအသက်အရွယ်ထိရောက်မှ ငါဘယ်သူလဲလို့စဉ်းစားခန်းဝင်နေရတာလဲ နဲနဲတော့ ရီစရာဖြစ်နေလိမ့်မယ် .မတတ်နိုင်ပါဘူး ..ပုထုဇ္ဇနော ။ဥမ္မတကော လို့ ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား ..လူတွေအားလုံးဟာ သူ့ နည်းနဲ့သူ ရူးနေကြတာဘဲလေ ..ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲ ဝန်ခံထားပါတယ် .. ဝမ်းတွင်းရူး ပေါ့ ( အမေ့ကို ထိခိုက်မိတယ် ဆိုရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပါအမေရေ )... လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အချစ်ဆိုတာ ရှိကြမှာပါ ..သူများကို မချစ်တတ်တဲ့ သူတောင်မှ အနဲဆုံး သူ့ ကိုယ်သူ ချစ်တတ်ကြပါတယ် ..ကိုယ့်ကိုကိုယ် အချစ်လွန်သွားရင်တော့အတ္တကြီးသူဖြစ်သွားမှာပေါ့ လေ ...
ဝမ်းတွင်းရူးအချစ် (IdiotLove).....အင်း ..အဲဒါကောင်းတယ်..ဝမ်းတွင်းရူးဆိုတာ ကုရာနတ္တိ ဆေးမရှိတဲ့ရှေးကလူတွေပြောကြတာလေ .. ခု ခေတ်ကြီးမှာတော့ ဘီ ပိုး ၊ စီပိုးတွေတောင် ကုလို့ ရနေတာ ..ပိုက်ဆံများများ ရှိဖို့ တော့လိုတယ်လေ ။ ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်အရူးအကြောင်းဆက်ရအောင်..
အဲဒီ ဝမ်းတွင်းရူးမှာလဲ အချစ်ဆိုတာ ရှိရမှာပေါ့ ။ သူလဲ Human Rights အရ သူများကို ချစ်ခွင့် ရှိတာပေါ့နော်.
ကုမရတဲ့ သူတယောက်မှာ ကြံကြံဖန်ဖန်ဖြစ်လာတဲ့ကုမရတဲ့ အချစ်တမျိုး ဖြစ်လာရတာ ..ဘယ်သူ့ ကို အပြစ်တင်လို့ရမတုန်း ။ သိတဲ့ သူ ရှိရင် ပြောပြကြစမ်းပါ ...နေမြင့်လေ အရူးရင့်လေ ဆိုလား ..ကြားဘူးတာဘဲ ။ နေမပူတဲ့ရာသီ မျိုး /နေရာမျိုးမှာတောင် တဖြေးဖြေး ရောဂါ ရင့် လာတာ ။ သူများကို ပြောပြရ ရင်လဲ အရူးစကားဆိုပြီး အလေးထားကြမှာ မဟုတ်ဘူးလေ .. ဒါကြောင့် ဒါကြောင့် ဒါတွေကြောင့်..
အရူးမှာလဲ အချစ်ရှိကြောင်း ပြောပြချင်လို့ဒီ Title လေး ဖြစ်လာရတာပါ ။
၂ခါ ပြန် မပြောဘူးနော် ..
စိုက် ကြည့် ရင် အ လိုက် သိ ကြ ပါ ဗျို့။။။။
:kiki : at 10/30/2008 01:07:00 PM